အတိတ်အကြောင်းတရားငါးပါး ဆင်ခြင်တော့ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဘဝတွေ မကြည့်ချင် လောက်အောင်ပဲ ထူးခြားတာ ကတော့အခုဘဝ မရခင်ဘယ်ဘဝ ရခဲ့လဲဆို တော့မြင် ရတာ ကလေးလေး ထိုင်တတ် စအရွယ် အဲ့ကလေး မြင်ရတဲ့အိမ်က ညီမလေး အန်တီ အိမ်အဲ့ကလေးလှေကားပေါ်က ပြုတ် ကျတာ မြင်လိုက် ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့ ညီမလေးအမေက အဲ့အချိန်တုန်းကအပျို ..အန်တီရဲ့ကလေး သွားထိန်းပေးရတယ်အဲ့ဒါအမေ့ကို ဖုန်းဆက်မေးတယ် အန်တီသမီး အကြီးဆုံး သေသွား တဲ့ တယောက် ငယ်ငယ်က လှေကား ပေါ်က ပြုတ်ကျ ဖူးလား အမေ လို့မေးတော့ အမေက ပြုတ်ကျ တာမှ အကြီး အကျယ် ပဲတဲ့..အေအဲ့ ကလေး ထိုင်တတ်စ အရွယ်က ပြုတ် ကျတာလား ဆိုတော့ အမေက ဟုတ်တယ်တဲ့နေဦး ည ည်း ကဘယ်လို သိတုန်း .. ငါတောင် မေ့နေပြီ..အေ့..ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲ အမအန်တီတို့ မိသားစုကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ သူတို့က ကိုယ့်အ ပေါ်မချစ်ကြဘူးစွဲလန်းစိတ်တွေက ဒီဘက်အထိ အထုံပါလာ တယ်ထင် တယ် နောက်ပီးလေ ထူးဆန်းတာ တခု ရှိသေး တယ် ညီမ အပျိုတည်းက ဆာရီ ဝတ်ပီး ဓာတ်ပုံ အရမ်း ရိုက်ချင်တာမနေ့က ဘဝတွေ ပြန်မြင်ရတော့ ကုလားမ ဖြစ်ခဲ့တာ ပဲ။
မင်းသမီး အခု ယောကျာ်းက အဲ့ဘဝ ကအမျိုးသား ဟိန္နုကုလား ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဘက်က အထုံက ဆာရီ မြင်ရင် သဘောကျတယ် သားမွေး ခါနီး အသျှင်သီဝ အိပ်မက်မက် တယ်ဟုတ် တယ်အမ တော်တော် လေးကို ထူး ဆန်းတယ် ကိုယ် တွေ့ မိုလို့ သူ များ တွေပြော ပြရင် ရူးသွား ပီ ထင်ကြ မလားမသိဘူး အကြောင်း တရားတွေ ဆက်စပ်နေ တယ်ဆို တာ သိခဲ့ရ တယ် ဘဝတွေ မလိုချင် တော့ဘူး လူရောနတ်ရောဗြဟ္မာရော သေရမှာချည်းပဲ သေခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေ မနည်းဘူး ပိုထူးဆန်း တာ ညီမ ယောကျာ်း တောထဲမှာ ဆား မစားပဲ အစာ ငတ်ပီး ၄လလောက်နေခဲ့ ရတယ်သူက ဘာ အကု သိုလ်ကြောင့်လဲ ကြည့်ပေး မိန်းမ တဲ့.. ကြည့်ပေး တော့ ဒီနေ့ည တရား ထိုင်မှ မြင် ရတယ် အမ အဲ့ကုလား မင်းသမီး ဘဝမှာ သူကယောကျာ်း အပြစ်သား တွေကို အပြစ် ဝန်ခံအောင် အစာ ရေဆာ ဖြတ်ခဲ့ တယ်ဒီ နေ့အချိန်ထိ အဲ့အကုသိုလ်တွေ ခံစားနေရတယ် အခုထိလဲ ပင်ပန်းဆင်းရဲ စွာ လုပ်နေရ တယ်အကြောင်း တရားကြောင့်အကျိုးတရား ဖြစ်နေတာ ညီမက သူလုပ်ခဲ့ တာသ ဘောတူ ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ်မလုပ်ပေမဲ့ သူပင်ပန်းဆင်းရဲတာ ကြည့်ပီး ကိုယ်က စိတ်ဆင်းရဲ နေ ရတယ်ကံတရားတွေ ကြောက်စရာကြီး အမဘဝမှာ လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ အလွယ် မရဘူး လူ မဟုတ်ရင် စိတ်ပင်ပန်းပီးမှ ရတာကြီးပဲ သံဝေဂရနေပါပီ အကုသိုလ်တွေလဲ ကြောက် လှပါပီ ညဘက် တွေအိပ်မ ပျော်တော့ ဘူး တွေး တွေး ပီးတော့ ညီမလေးတောင် ဘုရား ဖူးရတာ ကို စိတ်ဝင် စားပီး တရား စခန်း ဝင်ခဲ့တာ ကိုယ် တွေ့မှပဲ ငိုရမလို ရယ်ရမလို ဖြစ်နေပီ အမရေ..ညီမ မှာ အရင်ဘဝတွေမြင်ပီး ငိုချင် ငါတော့ တရားအသိတွေရပီဟ ဆိုပီး ရယ် ရမလို ဖြစ်နေပီ ။
ဆက် ပြီး ကြိုးစား အား ထုတ် သွားရင် မိသားစု နဲ့ နေ ပေမယ့် မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ တရား တွေနဲ့ နေ ထိုင် ပြီး ဖြတ်သန်း သွား လို့ ရပါပြီ sis ရေ တရား သိသွား တော့ နေ ပျော်သွား တာပေါ့ အရာရာ သတိ လေး ရှိနေ ပြီ ဆိုတော့ အကုသိုလ် ဖြစ်ခွင့် တွေ နည်း သွား တာပေါ့…….((စာရေးသူ အဖြေ))ခုလို လေး cb ကနေ မိမိတို့ အား ထုတ် ပြီး တဲ့ အတွေ့ အကြုံ လေး တွေကို လာ လာပြီး မျှဝေ ပေးတက် ကြပါတယ်..တ ယောက် မက ပါဘူး.. ဒီတ ခါတော့ ယောဂီ အသစ် တွေ သဒ္ဓါ ဖြစ်ဖွယ် cb က စာလေး တွေ ကို copy ယူ လာပြီး မျှဝေ ပေးတါ ပါ ရှင့် ..ပြောမယုံ ကြုံဖူး မှသိ..ပြောမယုံ ကျင့်ဖူး မှသိ..ဆိုသလို… ပဌာန်း မှာလည်း ဖဘုရားရှင် ကြီးက ဟော ထား ပြီးသား ပါ..မွေးကင်းစ ကလေးလေး တွေဟာ အိပ်နေ တုန်း ရယ်တာ တို့မဲ့တာ တို့ ဖြစ်ဖြစ် သွား ရတာဟာ..မိမိတို့ လာခဲ့တဲ့ ဟိုဘက် ဘဝကို အာရုံပြု ပြီးနေနေ ကြလို့. ပါ . တဲ့ တချို့က လူ့ပြည် နတ်ပြည် က လာရင် ပြုံးပြုံး နေတာ ပါတဲ့..နဲနဲ လေး ကြီးတော့ မိခင်မြူဒါ တာဒါ တွေကို လိုချင် သိချင်တဲ့ လောဘ လေးတွေ များများ လာရာ ကနေ အတိတ် ဘဝ ကို တ ဖြေးဖြေး မေ့သွား ကြ တာပါ တဲ့..။
ပဌာန်း မှာ အကျယ် တဝင့် ဖတ်ကြည့် နာကြား ကြည့်ပါနော်..တကယ်တော့ ကိလေသာ တွေ ပါး ရှားနေ တဲ့ အချိန် တနည်း သမာဓိ တွေ ထက်လွ န်း နေတဲ့ အချိန် တွေမှာ မိမိတို့ ၏ ဘဝ တွေ ကို ပြန်မြင် ရတယ် ဆိုတာ မဆန်းတော့ပါ..ဖဘုရားရှင် ကြီးက လည်း ပဌာန်းကျမ်းမှာ ဟောပြီးသား ပါ..စကား မစပ် စာရေးသူ ၏ အမ ဝမ်းကွဲ တယောက် က တရား အားထုတ် တော့ အဲ့လို သူ့ဘဝ တွေ ပြန်မြင် ရတဲ့ အကြောင်း တွေ ပြန်ပြော ပြခဲ့ ဖူးစဥ် အခါ က…စာရေးသူ ဟာလေ…ha..ha.. ha ပေးခဲ့ သူလေးပါ မယုံဖူးလေ.. စကားလုံး တွေနဲ့ တောင် ပြစ်မှား မိခဲ သေးတာပါ.. အရမ်း နောင်တ ရမိပါတယ်..မိမိဉာဏ်လေး တထွာ တမိုက်နဲ့ သမာဓိ က zero နဲ့ ဘာမှလည်း မကျင့်ဖူး ပဲ နဲ့..အဲ့ အချိန် တုန်းက… စာရေးသူဟာ တကယ် ကို လူဆိုးကြီး ပါလို့…အာ့လေး ပြော ပြတာပါ..အကုသိုလ်တွေ တပွေ့ တပိုက်ကြီး သယ်ဆောင်နေတဲ့ ကာလ တွေပေါ့ ..ခုတော့… ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားပြီ ။
တနေ့ တနေ့ fb ဖွင့်လိုက်ရင်…ကုသိုလ် ဖြစ်စရာ အာရုံတွေ နဲ့ ယောဂီ တွေရဲ့ ကုသိုလ် မှတ် တမ်း လေး တွေ ကို ကြည်နူး ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ် ရင်း….ကုသိုလ် များ နှင့် အချိန် တိုင်း ကို ဖြတ် ကျော် မိနေပါပြီ လိုစ့် ..ယောဂီ အသစ်များ အတွက် အားကျဖွယ် ရေးသား လိုက်ရပါသည်.. ။
Online တရားစခန်း ကြီးဟာ ဆိုရင် ဖြင့် တကြိမ် နဲ့ တကြိမ် တယောက် ကနေ စလို့ တမိသားစု လုံး တဆွေမျိုးလုံး တရားတွေ အားထုတ် နေကြတာ ကို မြင်နေရလို့..ဝမ်းသာပီတိ ဂွမ်းဆီထိ လို့ နေရပါတော့သည်….. သတ္တဝါ အားလုံး တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ ရှင် ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်